Uyazi uma ngabe isikrini sokuqala sithathelwa indawo lapho kulungiswa iselula? Ngena ngikufundise ukuthi ungabona kanjani isikrini sangempela nesikrini esingelona iqiniso
Imvamisa, sihlala sihlangabezana nesimo sokuthi isikrini somakhalekhukhwini siphukile ngengozi, amanye amacala aphukile ingilazi yengilazi, amanye isikrini sangaphakathi asibonisi naso siphukile. Umlungisi wenkampani yangaphandle uzokubuza ukuthi ufuna eyangempela noma ejwayelekile. Gen ...
Isikhathi se-BPM Ekhuluma ngalo mkhiqizo, abanye abantu kumele ukuthi bawubonile. Eqinisweni, uma kukhulunywa ngokuqinile, lo mkhiqizo awunakubizwa ngokuthi iselula. Le mishini yavela okokuqala ngekhulu lama-20, lapho iShanghai kwakuyidolobha lokuqala ukuvula iziteshi zokukhokha. Ngemuva kwalokho, imishini ye-BP yangena ngokusemthethweni ...
Usayizi bekulokhu kuyisiqondiso esibalulekile ekwakhiweni kwesikrini sefoni ephathekayo, kepha ifoni ephathekayo enamasentimitha angaphezu kuka-6.5 ayifanele ukubamba isandla esisodwa. Ngakho-ke, akunzima ukuqhubeka nokukhulisa usayizi wesibuko, kepha iningi lemikhiqizo yamafoni ephathekayo inikeze ...
Kungani isikrini sibheke kahle phansi lapho umakhalekhukhwini usesetafuleni? Akukona nje okobumfihlo
Ake ngikubuze umbuzo kuqala Umakhalekhukhwini uvame ukubekwa etafuleni uma ungasetshenziswa, Ingabe ubeka isikrini phezulu noma isikrini phansi? Kepha uyazi ini? Beka iselula kudeskithophu isikrini sibheke phansi. Uzokwazi ukuthi kungani ngemuva kokufunda okulandelayo? Izinzuzo ezintathu ze ...